‘युवा खेलाडीमाथिको विश्वास नै जितको आधार’—प्रशिक्षक टमाटा - संवाद - नेपाल
प्रशिक्षक जगत टमाटाका लागि नेपाललाई मुख्य प्रतियोगितामा उभ्याउनु अब कुनै नौलो कुरा रहेन । टमाटाको प्रशिक्षणमा नेपाली यू–१९ क्रिकेट टोली दुईपटक (सन् २०१२ र २०१६ मा) आईसीसी युवा विश्वकपमा खेलिसकेको छ । नामिबियामा सम्पन्न विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन–२ मा नेपाललाई उपविजेता बनाएपछि टमाटाले फेरि आफूलाई अब्बल साबित गरेका छन् । २० फागुनदेखि जिम्बाबेमा सुरु हुने विश्वकप छनोट खेल खेल्न लागेको नेपालबारे राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक टमाटासँग गरिएको कुराकानी :
नेपालको डिभिजन–२ यात्रालाई कसरी लिनुभएको छ ?
डिभिजन–२ को यात्रा एक दिनको होइन । यो यात्राका लागि हामीले धेरै वर्षदेखि तयारी गरेका थियौँ । यसका लागि खेलाडीहरूले धेरै मिहिनेत गरेका छन्, इमान्दार भएर खेलेका छन् । आठ दिनमा ६ खेल खेल्नु सजिलो कुरा थिएन । खेलाडीले एकपछि अर्को म्याचलाई सहज रूपमा लिएर खेले । हाम्रो टिमको उद्देश्य विश्वकपका लागि छनोट हुने थियो, त्यसबाहेक अरू केही सोचिएकै थिएन । खेलाडीले त्यसका लागि सारै मिहिनेत गरे । त्यसका साथै प्रशिक्षण टोलीले पनि उस्तै मिहिनेत गर्दा हामी विश्वकप छनोटमा पुग्न सफल भयौँ ।
डिभिजन–२ अघि नेपाल विश्वकपमा छनोट हुन्छ भन्नेमा तपार्इं कतिको आशावादी हुनुहुन्थ्यो ?
हाम्रो टिममाथि मलाई विश्वास थियो । यसपटक धेरै राम्रो र सन्तुलित पनि थियो । यू–१९ बाट आएका पाँच खेलाडी राखिएकाले युवा र सिनियर खेलाडीको तालमेल मिलेको थियो ।
नामिबियामा जित्न सकिने टोलीसँग हार्‍यौँ र जित्न कठिन हुन्छ भनेको टोलीलाई हरायौँ । के कारणले यस्तो भयो ?
हामीले ‘सबै टिम राम्रा छन्, सबैसँग राम्रो खेल्ने हो’ भनेका थियौँ । जितको मुख्य कारण हामीले शतप्रतिशत राम्रो खेलेकाले हो । साथमा टसको पनि भूमिका रह्यो ।
डिभिजन–२ अघिका पछिल्ला खेलहरू हार्दा तपाईंको प्रशिक्षणमा धेरैले प्रश्न उठाएका थिए । नेपाललाई विश्वकप छनोटमा पुर्‍याइसकेपछि तपाईं आफ्ना आलोचकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
आलोचकलाई मेरो केही प्रतिक्रिया छैन । कसैलाई पनि पहिला विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । प्रशंसकहरूले समर्थन गरिदिनुभयो । सबैलाई धन्यवाद छ ।
इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)मा दिल्ली डेयरडेभिल्सले लिएपछि सन्दीप लामिछानेको प्रदर्शनमा कत्तिको फरक आएजस्तो लाग्छ ?
उनले आफ्नो प्रदर्शन सुधारेका छन् । तर, सिक्न अझ धेरै बाँकी छ ।
युवा खेलाडीहरूको प्रदर्शनले नेपालको विश्वकप यात्रामा कत्तिको प्रभाव पार्न सक्छजस्तो लाग्छ ?
युवा खेलाडीले टिमलाई विश्वास दिलाए । टिमले पनि उनीहरूमाथि विश्वास गर्‍यो । उनीहरूले अझ राम्रो खेल्न सक्छन् । यसपटक प्राप्त गरेको सफलता यसैको परिणाम हो ।
डिभिजन–२ मा फेरि पनि ओपनिङ ब्याटिङ अर्डर असफल भयो । आउँदा दिनमा उनीहरूले लय समात्नेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
उनीहरूले आउँदा दिनमा राम्रो गर्ने विश्वास छ ।